အမေး(၂) မနန်းကြူကြူလွင် (virtueloyalty@gmail.com) | ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာ ဘိဝံသ
အမေး(၂) မနန်းကြူကြူလွင် (virtueloyalty@gmail.com)
Submitted by test on Fri, 2013-03-08 09:56
တပည့်တော်သည်နိုင်ငံခြားသားခရစ်ယာန်တစ်ယောက်နှင့်ဘာသာရေးအကြောင်း ပြောဖူးပါသည်။ ထိုသူကငါးပါးသီလမမြဲလျှင်ငရဲသို့ကျိန်းသေ ရောက်ရမည်ဟု မြတ်စွာဘုရားက ဟောထားသည်ကို ကြားဖူးကြောင်းပြောပါသည်။ မိမိကသီလကိုတစ်သက်လုံး စောင့်ထိန်းလာသော်လည်း ၁ကြိမ်၁ခါ ဥပမာ အားဖြင့် မုသာဝါဒါကိုကျူးလွန်လိုက်မိသည်ရှိသော်ငရဲသို့ ရောက်ရမည်ကိုသိကြောင်း..ထိုသူကနိဗ္ဗာန်ကို တောင်တစ်လုံးနှင့် ဥပမာ တင်စားပြပါသည်။တပည့်တော်တို့သည် နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင် ကြိုးစားသောအခါ ထိုတောင်ကို ဖြတ်ရသည်နှင့်တူသည်။ သို့သော် တောင်ကို ဖြတ်မည် ကြိုးစားလိုက်..ငါးပါးသီလကို တစ်သက်လုံး လုံအောင် စောင့်ထိန်းလာပါလျက်..တောင်ကျော်ခါနီးမှ မတော်တဆ တစ်ပါးသော သီလကို ဖောက်ဖျက်မိခဲ့သည်ရှိသော်..တဖန်ငရဲကျလိုက်နှင့် အဘယ်သို့ တောင်ကို ဖျက်ရမည်နည်းဟု မေးပါသည်။ တပည့်တော်မသည် ပါရမီ ဖြည့်ဆည်းပြီး ကောင်းမွန်စွာ သီလစောင့်ထိန်း..၀ိပဿနာကို ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ပြီး သောတာပန် တည်လျှင် ထိုတောင်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မည် ဟုသာ သိပါသည်။ သို့သော် ထိုသူက အကျပ်ရိုက်အောင်မေးသောအခါ.." သောတာပန်မရောက်ခင် တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက် သီလ တစ်ပါးပါးကို ချိုးဖောက်မိလျှင် ငရဲရောက်ရမည်.သီလ တစ်ခါ ပျက်ပြီ ဆိုကတည်းက ငရဲသို့ကျိန်းသေ ရောက်မည် ဟု မြတ်စွာဘုရား ဟောထားသည်." ထိုကဲ့သို့ ချိုးဖောက်မိသော အပြစ်အစား ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကအပြစ်ကျေပေးနိုင်သည်။ငရဲမှလွတ်အောင်ကယ်ပေးနိုင်သည်"ကိုသာမရရအောင်ဆွဲ
ပြောပါသည်။..အရှင်မြတ်ဘုရား...ထိုသူ၏ မေးခွန်းများကို တပည့်တော်မ မဖြေတတ်ပါ အရှင်ဘုရား။။ (တကယ်တော့အင်္ဂလိပ်စကားကိုဘာသာရေး နှင့် ပတ်သတ်ပြီး မကျွမ်းကျင်ပါက မဆွေးနွေးသင့်ကြောင်း တပည့်တော်မ ပြီးမှ သိပါသည်။) အင်္ဂလိပ်လို ဆိုတော့ ဖြေဖို့ ပိုခက်ပါသည် အရှင်ဘုရား။တပည့်တော်မသည် သီလနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ငရဲသို့ကျရောက်ပုံ.မရောက်ပုံ ကို သိချင်ပါသည်။ သီလနှင့်ပတ်သတ်သော မှတ်သားသိမြင်စရာ စာအုပ် (သို့) တရားတော်ကို နာကြားရလိုပါ၏။ ဘာသာပြန်ထားသည်ကို ရနိုင်ပါကလည်း အလွန်အကျိုးထူးပါ၏ အရှင်ဘုရား။ တပည့်တော်မ၏ စာရှည်သွားသည်ကို လည်းတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖော်ပြမှသာ မြင်သာသောကြောင့်ပါ အရှင်ဘုရား။ ကျေးဇူးကြီးမြတ်လှသော အရှင်ဘုရားအား ရိုသေစွာ ရှိခိုးကန်တော့ပါ၏။
ငါးပါးသီလမမြဲလျှင် ငရဲသို့ကျိန်းသေရောက်ရမည်ဟု မြတ်စွာဘုရားမဟောပါ။ ငါးပါးသီလနှင့် ပတ်သက်သော အကုသိုလ်စေတနာသည် ငရဲ၊ တိရစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာ၌ ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုသာဟောပါသည်။
ဖြစ်ရမည်နှင့် ဖြစ်စေနိုင်သည်မတူပါ။ တစ်ခြားအကြောင်းများကို ထည့်တွက်ရပါမည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ မဟာကမ္မ၀ိဘင်္ဂသုတ်ကို လေ့လာကြည့်ရမည်။ ကုသိုလ်ကံနှင့် အကုသိုလ်ကံနှစ်မျိုးတွင် ကုသိုလ်ကံက စွမ်းအား ပိုကြီးသည်။
တစ်ကြိမ်တစ်ခါ သီလချိုးမိရုံနှင့် တစ်ခြားအကြောင်းးများကို ထည့်သွင်းမစဉ်းစားပဲ ငရဲကျသည်ဟု ယူဆသည်မှာ လုံးဝမမှန်၊ စဉ်းစားကြည့်ရန်….
ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူနှစ်ဦးတွင် တစ်ဦးက ငွေကြေး ဓနပြည့်စုံ သည်။ အမှီကောင်းရှိသည်။ တစ်ဦးကမရှိ၊ မရှိသူသာထောင်ကျ၍ ငွေကြေးဓနတတ်နိုင်သူ အမှီကောင်းရှိသူမှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့် လွတ်ငြိမ်းခွင့်ရနေသည်။ လက်တွေ့သာဓက ပေါများလှ၏။ ခရစ်တော်က အပြစ်ကို ချေပေးနိုင်သည်၊ ငရဲကလွတ်အောင် ကယ်တင်နိုင်သည်ဟုဆိုခြင်းမှာ အပြောမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့ သာဓကမရှိ ၊ ဖြစ်နိုင်စရာလည်းမရှိ ၊ ခရစ်တော်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးစရာ ၊ ပြောစရာများစွာ ရှိသော်လည်း
ယုံကြည်သူတို့ စိတ်မထိခိုက်စေရန် မပြောတော့ပါ ။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဥပမာစကားတွင် ထောပတ်အိုးကို ရေထဲနစ်၍ ခွဲလိုက်လျှင် ထောပတ်သည် မည်သည့်အခါမှ မြုပ်မသွား၊ အပေါ်တက်လာ၏။ အိုးကွဲများသာမြုပ်သွား၏။
ထို့အတူ ကုသိုလ်စိတ်သည် ထောပတ်နှင့်အလားသဏ္ဌာန်တူ၍ ဘယ်သောအခါမှ အောက်မမြုပ်၊ ဗုဒ္ဓ၏ တရားတော်သည်၏ သဘာဝကိုသာဟောသည်။ကယ်တင်ရှင်ဆိုသည်မှာ လုံးဝမရှိနိုင်၊ တကယ့် ကယ်တင်ရှင် အစစ်မှာ မိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးသော
Fri, 2013-03-08 10:47